Canada na Sweden kachasị njem njem LGBT-enyi na enyi
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » LGBTQ » Canada na Sweden kachasị njem njem LGBT-enyi na enyi
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • omenala • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • LGBTQ • Akụkọ okomoko • News • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Akụkọ na -agbasa ozi Sweden • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a
Ntughari nke mmekorita alụmdi na nwunye na nso nso a emeela ka ọnọdụ Germany kawanye mma na SPARTACUS Gay Travel Index, na-eme ka ọtụtụ ndị mba LGBT nwee mmasị. Germany na mba iri na otu nọ ugbu a na-anọ n'ọkwa. Canada na Sweden na-ahụ onwe ha n'elu ndepụta. A na-emelite Ntugharị SPARTACUS Gay Travel Index kwa afọ ma na-agwa ndị njem banyere ọnọdụ nke ndị nwanyị, ndị nwere mmasị nwoke, bisexuals na transgenders (LGBT) na 197 Mba na Mpaghara.
Maka oge mbụ n'afọ a, SPARTACUS Gay Travel Index na-eburu n'uche ọnọdụ iwu nke ndị transgender. Canada na-enweta akara zuru oke na njirisi a wee si otú a na-ejisi ike ijikọta ọnụ na Index ahụ na nke mbụ ya na Sweden. Mba iri kacha nwee mmekọrịta enyi na enyi gụnyere ndị ọkachasị mba European Union nke gosipụtarala iwu mmekorita alụmdi na nwunye, dịka Netherlands, France, Spain na Belgium. SPARTACUS Gay Travel Index na-ahụkwa ndozi na Israel, Colombia, Cuba na Botswana. N'aka nke ọzọ, n'ihi ọtụtụ ogbugbu nke ndị mmekọ nwoke na nwoke, ụmụ nwanyị ibe na nwoke na nwoke na nwanyị na nwanyị na 2017, edebarala Brazil akara nke ọma ma tụnyere afọ ndị gara aga. USA nọkwa na ndakpọ efu, na-ewerezi ya ugbu a na 39th karịa nke 34 gara aga. Nke a bụkarịrị mbọ ndị gọọmentị Trump na-agba iji gbochie ikike transgender na ndị agha yana ịkagbu iwu ịkpa oke ịkpa ókè nke etinyegoro n'okpuru gọọmentị gara aga.
Na mkpokọta, Somalia, Saudi Arabia, Iran, Yemen, United Arab Emirates, Qatar na Malawi nwetara oke mmetụta na-adịghị mma, ebe Federal Republic Chechnya nwụrụ na njedebe ikpeazụ na ndepụta ahụ, n'ihi mkpagbu na ogbugbu nke ndị na-edina ụdị onwe na 2017 na-ewere ọnọdụ ebe ahụ.
SPARTACUS Gay Travel Index na-achikota site na iji njirisi 14 na uzo ato. Categorydị nke mbụ bụ ikike obodo. N'ime ihe ndị ọzọ ọ na-enyocha ma a na-ahapụ nwoke na nwanyị idina nwoke ma ọ bụ nwanyị ịlụ di na nwunye, ma enwere iwu ịkpa oke agbụrụ, ma ọ bụ otu afọ nkwenye ahụ metụtara ma nwoke na nwanyị idina nwoke ma ọ bụ nwanyị idina nwoke. Edere ịkpa ókè ọ bụla na ngalaba nke abụọ. Nke a gụnyere, dịka ọmụmaatụ, mgbochi njem maka ndị bu nje HIV yana mmachi na mpako ma ọ bụ ngosi ndị ọzọ. Na mpaghara nke atọ, a na-enyocha iyi egwu ndị mmadụ na mkpagbu, ikpe ụlọ mkpọrọ ma ọ bụ ntaramahụhụ ọnwụ. Akụkụ enyochare gụnyere ngalaba na-ahụ maka oke ruru mmadụ bụ "Human Rights Watch", mgbasa ozi UN "Free & Equal", yana ihe ọmụma kwa afọ gbasara imebi oke mmadụ megide ndị otu LGBT.
Restaurantslọ oriri na ọ restaurantsụ Delụ Delhi, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na ụlọ mmanya na-enweta ezumike ụtụ
Grand Canyon na Oman na-agbakwunye Thai Hospitality na ...
Na -adị ndụ ma na -eme nke ọma! UNWTO, ọ bụ oge ịhazigharị ...
Lufthansa na-enweta ego ọzọ na isi obodo ...